HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo Diiday inay Qirato Guuldarada ka soo Gaartay raacdada ay ugu jirtay Paul Pogba.
May 22, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay hal heshiis oo kamadambays ah u soo bandhigto Paul Pogba iyada oo rajaynaysa in ay ku qanciso xiddiga khadka dhexe in uu u dhaqaaqo Paris xagaagan.
29-sano jirkaan ayaa isku diyaarinaya inuu beeca xorta ah uga tago Manchester United dhamaadka bisha soo aadan, waxaana hubaal ah inuu u saftay kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee kooxda, iyadoo dhibaato kubka ah ay ka saari doonto kulanka Axada ee Premier League. Crystal Palace.
Juventus ayaa wadahadalo kula jirtay wakiilada xiddiga heerka caalami ee dalka France usbuucii la soo dhaafay, iyadoo Old Lady ay go’aansatay inay dib ula soo wareegto beeca xorta ah.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , kooxda reer Talyaani ayaa u soo bandhigtay ku guuleystaha Koobka Adduunka qandaraas ku kacaya 30 milyan ginni seddexda xilli ciyaareed ee soo socda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Juventus ay ku kalsoon tahay inay ku guuleysatay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo afar sano oo guulo ah ku qaatay Turin horaantii xirfadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa lagu eedeeyay inay diidan tahay inay ka quusato raacdada ay ugu jirto ciyaaryahanka khadka dhexe, waxaana ay sameyn doontaa ‘hal qandaraas oo kama dambeys ah’ iyadoo rajeyneysa inay ku duusho Paris.
Kooxda reer France ayaa awood dhaqaale u leh in ay Pogba u gacan galiso heshiis lacag badan xagaagan inkasta oo ay Kylian Mbappe ka saxiixday heshiis qaali ah .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa markii hore ka tagay Man United isagoo ku biiray Old Lady 2012, waxaana uu kula guuleystay afar horyaal oo Seri A ah iyo labo Coppa Italia, ka hor inta uusan lacag badan ku soo laaban Old Trafford.
Pogba, oo sidoo kale lala xiriirinayo Real Madrid , ayaa si weyn ugu dhibtooday inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa lixdii sano ee la soo dhaafay, inkastoo ay ku adkeyd inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa heer caalami.
Da’yarkii hore ee Le Havre ayaa seegay afartii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee ay Man United la ciyaartay Arsenal, Chelsea, Brentford iyo Brighton & Hove Albion xanuun kubka ah oo soo gaaray bartamihii bishii April.
Pogba ayaa xilli ciyaareedka 2021-22 ku soo gabagabeyn doona hal gool iyo sagaal caawin 27 kulan oo uu saftay heer kooxeed, halka uu mar labaad ka tagi doono Man United isagoo rikoor 39 gool dhaliyay iyo 51 caawin 233 kulan oo uu saftay.
Dhanka kale 178 kulan ayuu u saftay Juventus intii uu joogay kooxda isagoo u dhaliyay 34 gool sidoo kale caawiye ka noqday 40 kale.
Pogba ayaa lasheegayaa in uu heshiis shaqsi ah la gaaray Manchester City oo uu ku aadayo Etihad Stadium ka hor inta uusan badalin go’aankiisa waqtigii ugu dambeeyay sababo la xiriira cabsi uu ka qabo in taageerayaasha Man United ay dib ugu laabtaan.
Laacibka khadka dhexe ayaa la sheegay in uusan heshiis cusub u soo bandhigin kooxdiisa haatan tan iyo xagaagii hore, iyadoo 20-ka jeer ee horyaalka Ingariiska ay isku diyaarinayeen inay ka soo dhaqaaqaan xiddiga reer France ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.